Esi eji mmiri biohumus mee ihe: ntuziaka maka ojiji - Fatịlaịza - 2019
Ezigbo owuwe ihe ubi na mmepe nke ọma nke ubi na ubi a na-akọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ha anaghị azụ nri. Ọzọkwa, ọ dị mkpa ịmalite usoro a ogologo oge tupu akuku (na ogbo nke ịgha mkpụrụ) wee gaa n'ihu n'ihu. Dị ka ị maara, nri dị na ịnweta ma ọ bụ organic, ụdị abụọ a dị oke mkpa maka osisi. Mmiri mmiri na-ekpuchi mmiri bụ ihe ndị a na-ahụ maka ndị na-eto ugbo na ndị na-elekọta ubi, nke dị irè ma dị mfe iji, ma tupu ịmalite iji ya, ọ bara uru ịghọta ihe ọ bụ na otu o si arụ ọrụ.
Kedu ihe bụ mmiri mmiri ji mee ihe?
Ihe mejupụtara nke biohumus mmiri mmiri
Mmiri mmiri na-emepụta mmiri mmiri bụ ihe ngwọta na-agụnye ihe niile e ji eme ihe.
Ị ma? Echiche nke "biohumus" sitere na njikọ nke okwu Latịn "humus", nke pụtara ụwa (n'echiche - ala), na "ọdịdị" mbu, na-egosi ndụ ndụ. Ya mere, biohumus bụ fatịlaịza na-emepụta ihe, ọ na-agụnye microorganisms bara uru maka ala, nke ọrụ ya dị mkpa na-egbu microflora na-arịa ọrịa ma jupụta ala na ihe ndị bara uru. Dị ka nkà na ụzụ mepụtara, fatịlaịza a bụ ngwaahịa a na-enweta site na nhazi nke nri site na earthworms, na okwu ndị ọzọ, a pụrụ ikwu na ikpuru na-eme ka biohumus mee.
Ihe ndabere nke biohumus bụ compost edozi site na ikpuru. N'ọdị anya, ọ dị nnọọ ka ala a na-emepụta nri, bụ nke buru ibu ma buru ibu. Otú ọ dị, na mgbakwunye na compost, fatịlaịza nwere ihe ndị ọzọ bara uru dị mkpa maka osisi na-eto eto na ịzụlite. N'elu mmiri mmiri, ihe ndị a nile nọ na steeti nke etisasịlarị ma kwadebe maka nchekwa maka osisi.
Site na otu nke anọ na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ihe ndị dị na biohumus bụ sodium na potassium salts nke acid acid, acids humic na acids fulvic onwe ha, ọkara na ndị ọzọ bụ ihe ndị dị ndụ - amino acids, ndị na-eto eto na-eto eto, ndị na-eme ka mmiri na-edozi ahụ.
Tụkwasị na nke a, biohumus nwere ihe ndị dị mkpa dị ka micro na macro dị mkpa site na osisi: nitrogen - site na 1 ruo 2%, phosphorus - site na 1.5 ruo 3%, potassium - site na 1.2 ruo 2% (ihe mejupụtara nitrogen-phosphorus-potassium akụrụngwa na mmiri nke mmiri na-eme ka ọ bụrụ ihe na-erughị 3 grams kwa 1 liter nke fatịlaịza), yana calcium, magnesium, ígwè, manganese na obere ego - boron, zinc na ọla kọpa (Otú ọ dị, nkezi nke arọ ọla na biohumus anaghị esi karịa kachasị ohere maka ala).
Biohumus nwere nnukwu vitamin.
Igwe mmiri nke biohumus - ọ bụghị karịa 7.5; iru mmiri - site na 40% ruo 45%, ihe nsị - site na 35% ruo 45%.
Onye na-emepụta na-eme ka a ghara ịhụ mkpụrụ osisi ahihia, ụbụrụ helmin na microflora ndị ọzọ na-emerụ ahụ maka osisi na biohumus.
Nri niile na mmiri mmiri dị na mmiri na-edozi ya n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ ziri ezi, nke ga-eme ka o doo anya na arụ ọrụ nke fatịlaịza a.
Ị ma? Ogbu mmiri, nke na-agafe ahịhịa ndụ site na eriri afọ ya, na-emepụta ihe ndị pụrụ iche, na-alaghachi n'ala, na-enwe ogige ndị dị mma maka osisi n'ime ha - ha na-egbochi ala ịsacha ma gbanye ya, kpochapu ya ma wuo ya. Ọ dịghị ndị ọzọ dị ndụ nwere ikike dị otú ahụ.
Site na ya onwe ya, biohumus na-ewusi osisi, na-eme ka uto na usoro nke photosynthesis na metabolism dị ngwa. N'ihi ya, àgwà ndị a mara mma nke ihe ọkụkụ na mmụba ha na-abawanye. Ma mmiri fatịlaịza mmiri na-emegharị n'ụdị mgbatị dị na ya. Na mgbakwunye, o nwere mmetụta siri ike antimicrobial na osisi na seedlings, na-amụba nchebe ha pụọ ​​na pests na ọrịa.
Biohumus nwere ihe niile ekwuru banyere ahihia nke irighiri na microflora wepụtara ya, nke na-ekpebi mmetụta bara uru nke fatịlaịza a.
ụlọ ma na-agwọkwa ala, na-alaghachi ọmụmụ ma na-egbochi ọrụ nke microorganisms pathogenic na ya;
na-akwalite mmepe nke osisi, na-enyere ha aka ịkụda ngwa ngwa na ngwa ngwa na-emetụta ihe ndị na-adịghị edozi ma ọ bụ ndị siri ike iru maka usoro mgbọrọgwụ ma hụ na ala dị ala;
eme ka mkpụrụ osisi na ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa, dịka ọmụmaatụ, powdery mildew, ire ere na ascochytosis (karịsịa irè maka akwụkwọ nri na griin na houseplants), mmetụta ndị na-emerụ emerụ nke pests, nakwa maka nsogbu ihu igwe na ihe ọjọọ ndị ọzọ;
enyere mkpụrụ aka ịme ngwa ngwa (mgbe ụfọdụ okpukpu abụọ), na seedlings na osisi saplings mma mgbọrọgwụ;
na-eme ka mmepụta okooko osisi dị mma, na-amụba ọnụ ọgụgụ ha na ndụ ndụ, nke bara uru maka osisi ọ bụla, ma na-ewe mkpa dị mkpa maka ime ụlọ ndị e ji achọ mma;
eme ka mkpụrụ osisi buru ibu (ruo izu abụọ), na-eme ka ha dị ukwuu, uto na àgwà bara uru (n'ihi mmụba nke shuga osisi, protein na vitamin), ebe ọ bụ na mmetụta a enweghị ihe jikọrọ ya na ndị na-emepụta ọgwụ na ndị na-eto eto;
Ọ na-egbochi nchịkọta nke nitrates na osisi site na iji ígwè dị arọ na ala na redioactive.
Otu ihe dị mkpa nke biohumus bụ na ihe ọ na-eme malitere fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa ngwa mgbe ọ nwụsịrị ma dịgide ruo ọtụtụ iri afọ. N'adịghị ka nri ndị ọzọ (dịka ọmụmaatụ, nwere chlorine na-emerụ ahụ), biohumus nwere ike itinye aka na ala n'oge ọ bụla n'afọ, ọ dịkwa mma maka ụdị ala ọ bụla.
N'ihi ihe ndị a nile, mmanụ ọka Biohumus Liquid achọtara ngwa ngwa n'ụdị dịgasị iche iche (site na ngwa ngwa ala na ịkụcha mkpụrụ na ịkụ mkpụrụ).
Ọ dị mkpa! Ekwesighi iji ihe ngwọta nke mmiri mmiri na-eme ihe ozugbo, ọ ka mma ịhapụ ya ka ọ nọrọ na ọkụ n'ihi na ọ dịkarịa ala awa anọ na mgbe ị gachara mmiri. N'ime oge nke ovary na mgbe okooko fertilizing ekwesịghị ime.
Ya mere ụzọ kachasị esi eji biohumus eme ihe bụ Fertilization n'ime ala (n'ala na-emeghe ma ọ bụ n'ite mmiri ezumike - maka ụlọ ime ụlọ). Dị ka fatịlaịza ọ bụla, njiriri nke biohumus na-egosi nrube isi na ọnụego nke ngwa, nke, dị ka iwu n'ozuzu, gụnyere itinye ngwọta 10% (otu akụkụ nke fatịlaịza mmiri na mpaghara iri), ma ọ nwere ike ịdịgasị iche dabere na ihe ndị a chọrọ n'ubi ahụ, na nakwa afọ ha na ogo ha.
Ya mere, maka elu, spinach, letus, eyịm na galik, mmezi kwa izu na ihe ngwọta nke mmiri mmiri nke mmiri na-akwado na ọnụego 0,2 l kwa otu ịwụ mmiri dị mma, iji fatịlaịza maka akwụkwọ nri chọrọ ntụgharị ngwọta ugboro abụọ, ma maka mkpụrụ osisi strawberries na tomato ndị ọzọ Naanị 60 ml nke mmiri mmiri humus zuru ezu maka ịwụ mmiri.
Osisi okooko osisi na-eri ugboro abụọ n'ọnwa na ngwọta nke 10-15 ml nke mmiri mmiri fatịlaịza kwa 1 liter mmiri, citrus mkpụrụ osisi na mkpụrụ vaịn - otu oge ahụ na ihe ngwọta nke 0,25 l kwa ịwụ mmiri. Mmiri mmiri mmiri dị irè mgbe a na-eji ya eme nri. A ghaghị ịme ha mmiri mgbe ha na-eto eto karịa ugboro abụọ n'ọnwa ọ bụla.
Ịgha mkpụrụ na biohumus bụ ụzọ nke abụọ iji fatịlaịza. Ọkara nke liter nke fatịlaịza na-eji germinate 1 n'arọ nke osisi. A ghaghị dozie ihe ngwọta ugboro abụọ karịa mgbakwasa mgbọrọgwụ (0.05 ml kwa 1 l nke mmiri). Oge oge dị iche maka ọdịbendị dịgasị iche iche.
Mkpụrụ akwụkwọ nri, melons, pasili, dill na ornamental osisi nwere ike tinye maka 24 awa; radish, letus, spinach, onions and garlic (mkpụrụ) - 12 awa ma ọ bụ obere oge; mkpo - ihe dị ka awa isii; mkpụrụ vaịn, mkpụrụ pọmigranet na citrus - ihe karịrị otu awa, na tubers - na ọbụna obere: ihe karịrị ọkara otu awa.
A na-ejikwa mmiri mmiri eme ihe iji lekọta seedlings. Ozugbo tupu ị kụrụ ya n'ala na-emeghe, a na-awụnye ihe nkwụsị nke fatịlaịza na-adịghị ike n'ime oghere a kụrụ ihe, n'ihi ya, seedlings na-agbanye mgbọrọgwụ ka mma ma na-arịa ọrịa.
Ọ dị mkpa! E nwere ike ịkụnye mgbọrọgwụ na-esighi ike maka otu osisi toro eto. Ya mere, na nke a, ọnụego ngwọta akwadoro maka ọdịbendị a ga - eji belata oge (!) Times.
Mmiri mmiri mmiri na-abakwa uru iji na-agba akwụkwọ ndụ, ma ebe a ka ịta nri kwesịrị ịdị ike - banyere 0.005 ml nke fatịlaịza kwa 1 liter mmiri. A gaghị eme usoro ahụ n'oge okooko, ma n'oge oge mkpụrụ osisi na-eto - dị mkpa.
Ojiji nke mmiri mmiri na-adịghị achọ ịgbaso ntuziaka ọ bụla pụrụ iche, n'ihi na ihe ahụ abụghị ọnya. Ya mere na fatịlaịza adịghị abanye n'ime afo ma ọ bụ anụ ahụ mucous, nakwa na microcracks adịghị abanye n'ime akpụkpọ ahụ, ọ ga-ezuru uwe globa n'ihu ọrụ, mgbe ọ rụchara - iji aka na mmiri saa aka gị.
A na-etinye mmiri n'ime karama plastik ndị dị nchebe kpamkpam site n'echiche nke iwu ọkụ.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na fatịlaịza na-adaba na anya ma ọ bụ na akpụkpọ ahụ, kpochaa nke ọma na mmiri na-agba agba. Ọ bụrụ na e were ya, saa afo na ngwọta na-adịghị ike nke potassium permanganate.
Njirimara bara uru nke mmiri biohumus nọgidere na-adịgide ruo otu afọ na ọkara site na ụbọchị mmepụta e gosipụtara na ngwugwu ahụ. N'otu oge ahụ, ọ dị mma iji chekwaa fatịlaịza na ebe gbara ọchịchịrị, ma n'ọnọdụ ọ bụla ọ bụghị ìhè anyanwụ kpọmkwem. Ọ bụrụ na akpa na fatịlaịza fọdụrụ na dacha na-eme ka oyi gwụ - agbapụla iji tụfuo ya: mgbe ọ laghachiri na mmiri mmiri, a pụrụ iji biohumus mee ihe dị ka ebumnuche ma ghara ịhapụ ihe onwunwe ya.
Ngwá mmiri ahụ adịghị egosipụtakwa na ekwesighi iji fatịlaịza eme ihe, ma tupu eji ocha ahụ emee ka ọ maa jijiji.
Ya mere, mmiri mmiri dị n'ime mmiri dị ezigbo mma, dị mma na gburugburu ebe obibi ma ọ bụ dị mfe iji fatịlaịza mmanụ, bara uru ma n'ala ma ọ bụ n'ogige, na iji mezie ụlọ griinụ, ọ bụrụ na ị maara otú e si eji ya eme ihe.
Uzo esi emepu mmanu ihe dika oyi n'oge obibi
Clematis na Siberia: nhọrọ dịgasị iche iche, ịkụ ihe na ilekọta osisi
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ntuziaka maka ojiji nke mmiri mmiri